News – Kantarawaddy News Wednesday, May 24, 2017
အစိုးရ စစ်တပ်၏ စစ်ကြောင်းများ လှုပ်ရှားမှု ကြောင့် တိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်နိုင်သည့် အနေအထားရှိနေ
ငွေတောင်ဆည်ဘောင်ပေါ်က အပန်းဖြေထိုင်ခုံ ဘယ်သူဖျက်တာလဲ
(၁၃) ကြိမ်မြှောက်ပါတီကွန်ကရက်၊ ပထမအကြိမ် ပါတီဗဟိုကော်မတီ မျက်နှာစုံညီ အစည်းအဝေး ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်
ဒေသခံတိုင်းရင်းသားပါတီမှ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသဲရယ် ဘာတွေဆက်လုပ်ဖို့ရှိမလဲ…..။
Kantarawaddy NewsA media of the State
သတင်းဆောင်းပါးအင်တာဗျူးမာလ်တီမီဒီယာကရင်နီဘာသာ ရုပ်သံအစီအစဉ်ကရင်နီဘာသာ ရေဒီယိုဂျာနယ်အတွေးအမြင်ကာတွန်းအယ်ဒီတာ့ထံ ပေးစာအယ်ဒီတာ့အာဘော်ဆက်သွယ်ရန်
NewsLocal News	Breaking News Ceasefire & Peace Process News Politics အစိုးရ စစ်တပ်၏ စစ်ကြောင်းများ လှုပ်ရှားမှု ကြောင့် တိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်နိုင်သည့် အနေအထားရှိနေ
May 20, 2017May 20, 2017
Phe Bu0Comment
စူးမယ် ကယား(ကရင်နီ)ပြည်ရှားတောမြို့နယ်တွင်းရှိ ကရင်နီတပ်များလှုပ်ရှားရာ နေရာထဲသို့ အစိုးရတပ်များဝင်ရောက်လှုပ်ရှား နေသည့်အတွက် နှစ်ဘက်ပစ်ခတ်မှုများဖြစ်ပေါ်လာမည်ကို စိုးရိမ်ရကြောင်း မေလ ၁၉ရက်နေ့မနက် ရှားတောဆက်ဆံရေးရုံးမှသတင်းပေးပို့ချက်အရသိရသည်။ ရှားတောဒေသအတွင်း အစိုးရတပ်များဝင်ရောက်နေချိန် တချိန်ထဲမှာပင် KNPP တပ်များနေထိုင်ရာ ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ် ဒေါတမကြီးဒေသဘက်တွင်လည်း အစိုးရစစ်ကြောင်းများစေလွှတ်လျက်ရှိသည်ဟုဆိုသည်။ Read more
News Tourism ငွေတောင်ဆည်ဘောင်ပေါ်က အပန်းဖြေထိုင်ခုံ ဘယ်သူဖျက်တာလဲ
Kantarawaddy Times0Comment
မူအက်စတာ ကယားပြည်နယ်ရဲ့ အထင်ကရနေရာအများကြီးထဲမှာမှ တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ငွေတောင်ဆည်ကို ခရီးသွားဧည့်သည်တွေကလည်း တနေ့တခြားလာရောက်လည်ပတ်လာကြသူတွေ တိုးများလာတာကို တွေ့နေ မြင်နေရပါတယ်။ အရင်က တိတ်ဆိတ်နေသမျှ ယနေ့ချိန်ခါမှာ ဘုရားဖူးရင်း၊ ရေချိုးရင်း၊ တမင်တကာအလည်လာတဲ့သူတွေ ၊ဆိုင်ကယ်တွေ၊ ကားတွေနဲ့စည်ကားနေပါတယ်။ ညအချိန်မှာဆိုရင် ကန်ဘောင်ပေါ်မှာ
News (၁၃) ကြိမ်မြှောက်ပါတီကွန်ကရက်၊ ပထမအကြိမ် ပါတီဗဟိုကော်မတီ မျက်နှာစုံညီ အစည်းအဝေး ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်
ကရင်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ ပါတီဗဟိုဌာနချုပ် (၁၃) ကြိမ်မြှောက်ပါတီကွန်ကရက်၊ ပထမအကြိမ် ပါတီဗဟိုကော်မတီ မျက်နှာစုံညီ အစည်းအဝေး ထုတ်ပြန်ကြေညာချက် PDF File ဖြင့် ရယူရန် Read more
Interviews Post-Election & Decentralisation ဒေသခံတိုင်းရင်းသားပါတီမှ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသဲရယ် ဘာတွေဆက်လုပ်ဖို့ရှိမလဲ…..။
ကန္တာရဝတီတိုင်း(မ်) မေး။ ။ ဦးသဲရယ်အနေနဲ့ အခု လွှတ်တော်မှာ ကျမ်းတွေစကြိမ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ ဘာလုပ်ဖို့ စီစဉ်နေလဲ။ ဖြေ။ ။ လောလောဆယ်မှာတော့ ဒီလွှတ်တော်မှာမေးခွန်းတွေ မေးဖို့ သိမ်းထားတယ် ။ ကျနော့်ကို ဒီလွှတ်တော်ရုံးပေါ့နော ရုံးဆောက်ဖို့အတွက်
Featured-Stories Government & Parliament ﻿ ဆန္ဒပြပွဲများ ဘာကြောင့်များလာခဲ့ရသလဲ
May 15, 2017May 20, 2017
မူအက်စတာ အန်အယ်လ်ဒီအစိုးရအဖွဲ့ အာဏာလွဲပြောင်းရယူခဲ့သည်မှာ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဧပြီလမှ ၂၀၁၇ ဧပြီလအထိမှာ ၁ နှစ်ပြည့်ခဲ့ချေပြီ။ ကယား(ကရင်နီ)ပြည်နယ်တွင် အန်အယ်လ်ဒီအစိုးရ တက်လာပြီးနောက် အကြောင်းအရာများအပေါ် အခြေခံကာဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှုများ အများအပြားဖြစ်လာခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆန္ဒပြမှုများ နေ့စဉ်နှင့်အမျှ များပြားလာခဲ့ရသလဲဆိုတာ။
Opinions Politics ဖယ်ဒရယ်လား ဖက်ဒရယ်လား
ဖယ်ဒရယ်ဆိုသည်မှာ Federal ဆိုသည့်စကားလုံးမှ မြန်မာမှုပြုထားသော စကားလုံးပင်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့် ဖက်ဒရယ်ဟုခေါ်လည်း ရပေသည်။ ဖယ်ဆိုသည်မှာ ဖယ်ထုတ်သည့်သဘော ဖက်ဆိုသည်မှာ ပေါင်းဖက်သည့်အဓိပ္ပာယ်ရှိသောကြောင့် ဖက်ဒရယ်ဟုသာ ခေါ်သင့်သည်ဟု ယူဆသူများလည်း ရှိပေသည်။ သို့ရာတွင် အမည်နာမတွေထက် အမှန်တကယ်အရေးကြီးသည်မှာ
News စာမတတ်သူများယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ဖြေပါက စကားပြန်တစ်ဦးခေါ်လာနိုင်
ဦးမြာ ယဉ်မောင်းလိုင်စင်လျောက်ထားသည့် စာမတတ်သူသူများအတွက် အခက်အခဲမရှိစေရန် ကူညီပေးလျက်ရှိသည်ဟု ကုန်လမ်းပို့ဆောင်ညွန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ လက်ထောက်ညွန်ကြားရေမှူး ဒေါ်နန်းစိုးစိုးဟတ် ကပြောသည်။ စာမတတ်သည့်သူများ လိုင်စင်လျောက်ထားရာတွင် စာတတ်သည့် စကားပြန်တစ်ဦးနှင့်အတူ တပါတည်းခေါ်လာပြီး ဖောင်များဖြည့်ခြင်း ၊ ယာဉ်စည်းကမ်းများ စစ်မေးခြင်းများ ပြုလုပ်ပေးသည်ဟု ဆိုပါသည်။
Featured-Stories Refugees & IDPs စစ်ဘေးကြောင့်နောက်တစ်ကြိမ်ထွက်မပြေးချင်တော့ဘူး
ထျိုးမြာ သစ်ပင်တွေပြောင်လုနီးဖြစ်အောင်ရှင်းလင်းထားတဲ့ တောင်ကုန်းတောင်တန်းတွေရဲ့ကြားထဲမှာရွာလေးတစ်ရွာရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီရွာရဲ့နာမည်ကတော့ ဒေါကလဲတင်ရွာလို့ခေါ်ပါတယ်။ ဒေါကလိုက်တေရွာဟာ ကယားပြည်နယ်၊ ရှားတောမြို့ပေါ်ကနေ ဆိုင်ကယ်နဲ့စီးသွားမယ်ဆိုရင် တောင်ကုန်းတောင်ကြားတွေထဲကို တစ်နာရီလောက်ရှိပါတယ်။ ရွာထဲမှာတော့ ကျွဲတစ်ကောင်နှစ်ကောင်စတွေ့ရပြီးတော့ တစ်ရွာလုံးမှာရေတွင်းတစ်တွင်းနဲ့ ကြက်၊ ဝက်တို့ကိုပဲတွေ့ရပါတယ်။ ပြီးတော့ ဘုရားကျောင်းတစ်ကျောင်းနဲ့ အိမ်ခြေလေးငါးဆယ်အိမ်လောက်သာလျှင်တွေ့ရပါတယ်။ လူမျိုးတွေကတော့
Land Confiscation & Farming News အပြန်အလှန်စွပ်စွဲအငြင်းပွားနေသောလွိုင်ကော်က မြေလုပွဲ
May 13, 2017May 13, 2017
ကန္တာရဝတီတိုင်း(မ်)- လွိုင်ကော်မြို့နယ် နမ့်ဘော်ဝမ်ရပ်ကွက်အနီး စစ်တပ်တောင်ကွင်းအမှတ် ၁၆၆ ရှိ မြေ ၇၇ ဧကကို မြို့ပြ စီမံကိန်းမြေ (Town Plan)နေရာဟုဆိုကာ အစိုးရ၏ ဌာနဆိုင်ရာအဆောက်အဦးများ တည်ဆောက်ရန် ရည်ရွယ်နေပြီး ယင်းမြေနေရာကို ကန့်ကွက်နေသူများက ၎င်းတို့၏
Featured-Stories Gender & Women Rights တိုးတိတ် ရှိုက်သံများ မကြားချင်တော့ပြီ
May 12, 2017May 13, 2017
စူးမယ် အခုလို နွေအချိန်ဟာ တောင်ယာရှင်းလင်း ခုတ်ထင်းနေတဲ့အချိန်ဖြစ်လို့ တောင်စောင်းလေးပေါ်မှာ ခပ်နွမ်းနွမ်း အပြင် အကျီင်္လက်ရှည်ကို ဝတ်ထားပြီး ဝါးခမောက်ကို ဆောင်းထားတဲ့ အသက် ၄၀ အရွယ် အိမ်ထောင်ရှင် အမျိုးသမီးတစ်ဦး ဖြေးဖြေးနဲ့ မှန်မှန်ပဲ တောင်ယာရှင်းနေပါတယ်။
Read more← Previous
Copyright © 2017 Kantarawaddy News. All rights reserved.Theme: ColorMag by ThemeGrill. Powered by WordPress.